Exodus 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
23 “Mma atosɛm nnyɛ wo dɛ.+ Na wo ne ɔbɔnefo nnni nsawɔso nnkodi adansekurum.+ 2 Nni nnipa dodow akyi nkɔyɛ bɔne,+ na nni nnipa dodow akyi nkɔka atosɛm mfa nnan asɛm ani.+ 3 Sɛ woredi ohiani asɛm a, nyɛ animhwɛ.+ 4 “Wuhu wo tamfo nantwi anaa n’afurum sɛ wayera a, fa no kɔma no.+ 5 Obi a ɔtan wo mpo, sɛ wuhu sɛ n’afurum hyɛ n’adesoa ase wɔ fam a, ntwa ne ho nkɔ. Boa no na ɔnsan no.+ 6 “Sɛ woredi ohiani asɛm a, hwɛ na woannan asɛm no ani.+ 7 “Twe wo ho fi atosɛm ho kɔ akyirikyiri.+ Nkum nea ne ho nni asɛm ne ɔtreneeni, efisɛ meremma ɔbɔnefo nni bem.+ 8 “Nnye adanmude, efisɛ nea ohu ade yiye mpo, adanmude tumi fura n’ani, na ɛma ɔtreneeni sesa n’ano.+ 9 “Nhyɛ ɔhɔho so,+ na munim sɛnea ɔhɔho kra te, efisɛ mo nso na moyɛ ahɔho wɔ Egypt asase so.+ 10 “Fa mfe asia dua w’asase so aba na twa so nnɔbae.+ 11 Na afe a ɛto so ason no, nnɔw so, gyaw ma ɛnna hɔ kwa.+ Ma ahiafo nnidi asase no so, na nea wobegyaw ama aka no, wuram mmoa nni.+ Saa ara na monyɛ mo bobeturo ne ngodua turo. 12 “Fa nnansia yɛ adwuma,+ na da a ɛto so ason no de, nyɛ adwuma. Ɛbɛma wo nantwi ne w’afurum ahome, na w’afenaa ba ne ɔhɔho adwudwo wɔn ho.+ 13 “Momma mo ani mmra nea maka akyerɛ mo nyinaa so,+ na mommmɔ anyame foforo din. Mommma obi nnte mpo wɔ mo ano.+ 14 “Afe biara munni afahyɛ mprɛnsa mma me.+ 15 Munni paanoo a mmɔkaw nnim afahyɛ+ no. Bere a mahyɛ wɔ ɔsram Abib+ mu no du a, munni paanoo a mmɔkaw nnim+ nnanson, efisɛ saa ɔsram no mu na mufi Egypt bae. Na obiara mmfa nsapan mmma m’anim.+ 16 Afei munni otwa afahyɛ no, bere a mode twa mo afuw mu nneɛma+ a edi kan,+ ne anoboaboa afahyɛ wɔ afe awiei, bere a moboaboa mo nnɔbae ano fi mfuw mu no.+ 17 Afe biara ɔbarima biara bɛba abegyina Awurade Yehowa, nokware Nyankopɔn no, anim mprɛnsa.+ 18 “Wukum aboa de bɔ afɔre ma me a, mfa biribiara a akaw nka mogya no ho. Na mma ade nnkye srade a wode bɔɔ afɔre wɔ m’afahyɛ mu no so.+ 19 “Fa w’afuw mu nnepa a wubetwa no kan no bra Yehowa wo Nyankopɔn fie.+ “Nnoa abirekyi ba wɔ ne maame nufusu mu.+ 20 “Meresoma ɔbɔfo+ adi w’anim na ɔbɛhwɛ wo ɔkwan so de wo akɔ baabi a masiesie+ no. 21 Hwɛ wo ho yiye wɔ n’anim na tie n’asɛm. Hwɛ na woansɔre antia no, efisɛ woyɛ bɔne a ɔremfa nkyɛ wo;+ me din da no so. 22 Na sɛ wowɛn w’aso tie n’asɛm na woyɛ nea mɛka+ nyinaa a, mɛtan w’atamfo ani na mahaw wɔn a wɔhaw wo+ no. 23 Me bɔfo bedi w’anim de wo akɔ Amorifo, Hitifo, Perisifo, Kanaanfo, Hiwifo ne Yebusifo asase so, na metu wɔn ase afi so.+ 24 Nkotow wɔn anyame, nsom wɔn, na nyɛ wɔn nsa ano adwuma no bi,+ na ka ahoni no gu na bubu wɔn abosom adum+ nyinaa. 25 Monsom Yehowa mo Nyankopɔn+ na obehyira mo aduan ne mo nsu so,+ na meyi ɔyare bɔne biara afi mo ntam.+ 26 Ɔbea biara nni hɔ a obenyinsɛn apɔn, na wɔrenhu obonin biara wɔ w’asase so.+ Mɛma nna amee wo.+ 27 “Mɛma me ho hu adi w’anim,+ na mɛma nnipa a wobɛkɔ wɔn nkyɛn no nyinaa ani atan. Na mɛma woahu w’atamfo atiko.+ 28 Ansa na wubedu hɔ no na mama ayamhyehye aka wɔn,+ na ɛbɛpam Hiwifo ne Kanaanfo ne Hitifo afi w’anim.+ 29 Merempam wɔn nyinaa mfi w’anim afe biako mu, na asase no annan amamfõ na mmoa bɔne ammu so ammɛhaw wo.+ 30 Mɛpam wɔn nkakrankakra kosi sɛ w’ase bɛtrɛw na woafa asase no.+ 31 “Asase a mede bɛma wo no befi Po Kɔkɔɔ no ano akosi Filistifo po ano, na asan afa sare no so akosi asubɔnten kɛse+ no ano. Na mede asase no sofo bɛhyɛ mo nsa na woapam wɔn afi w’anim.+ 32 Wo ne wɔn anaa wɔn anyame nnyɛ apam biara.+ 33 Nnye wɔn ntena w’asase so na wɔannyigye wo amma woanyɛ bɔne antia me. Sɛ wosom wɔn anyame a, ɛbɛyɛ afiri ama wo.”+